Izinwele zezinwele ze-Zoe zezinwele zowesifazane eMessina
NgoMgqibelo: 08: 00 - 19: 00
Kuvaliwe: UMsombuluko, uMgqibelo ntambama neSonto
Abalungisi bezinwele be-Zoe Woman - Messina
Izinwele eziphelele nemikhiqizo ye-Artègo kanye nensizakalo yomakoti esebenza kahle
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-6)
Zoe Hairstylists ngo-Catania 96 a Messina, yiSalone di Izinwele zezinwele zowesifazane obonwa edolobheni njengesiqinisekiso sesitayela, ngemikhiqizo ye-Artègo! Iphelele kumuntu wesifazane ofuna uBeauty neMpilo zezinwele zakhe futhi uhlala efuna ukuvuselelwa ezithambeni zakamuva zesitayela sezinwele. Zoe Hairstylists, iNgaphezu kwalokho, kufeza inkonzo ye Izitayela zomakoti yasekuqaleni nenhle ne Inkonzo yomakoti.
Zoe abalungisa izinwele eMessina - Abacwali bezinwele besifazane
Zoe Hairstylists, ngo-Catania 96 a Messina, okudlula sibonga amandla nokuhlangabezana nabasebenzi bawo abaqeqeshiwe kakhulu futhi ngibonga nokusetshenziswa kwe Imikhiqizo yobungcweti be-Artègo, phakathi kokuhamba phambili emakethe ye-Hair Care ne-Styling, kodwa ngaphezu kwakho konke ukuthola ukuvuselelwa okuqhubekayo kwezindlela zakamuva zemfashini zezinwele nezitayela zezinwele! Thembela ebuchwephesheni be Izinwele zezinwele zowesifazane ochwepheshe be Zoe Hairstylists ukuba nezindlela zokwelapha ezizokunikeza ukubukeka ukunakwa kuyo yonke imininingwane nezinwele ezinhle nezikhanyayo. Okukhethekile kweSalone di Izinwele zezinwele zowesifazane di Zoe Hairstylists izokuhambisa nge-Artègo Therapy engcono kakhulu yezinwele kanye ne-Scalp Care ezokunikeza ukubheka ukunakwa kwemininingwane nezinwele ezinempilo nezinhle, khona lapho!
Zoe Hairstylists eMessina - Izindlela zokwenziwa Bridal nezitayela zezinwele
Zoe Hairstylists, isinyathelo esisodwa esivela enkabeni a Messina, iyi-Salon Yobuhle lapho ungathembela kuchwepheshe khona njalo ukunakekelwa okusesikhathini nokwenziwa okulingene Izinwele zezinwele zowesifazane, ezikhethekile Ekugqokeni Izinwele kwe: Sika, Tint, Unaphakade, Ukwelashwa Okubusayo, Ukwelashwa Ngezempilo, Umakoti Nezinwele Zomkhosi. Abasebenzi be Zoe Hairstylists kwenza kutholakale kumakhasimende tkonke okuhlale ukufisa ukunakekelwa nobuhle bezinwele zakho, ukusebenzisa okungcono kakhulu futhi kusebenza kakhulu Imikhiqizo ye-Artègo Professional, eyaziwa ngekhwalithi nokuqamba okuqhubekayo. Ngaphezu kwalokho, i-Salone di Izinwele zezinwele zowesifazane Zoe Hairstylists yenza Inkonzo yomakoti ukukwenza umuhle futhi ugcwalise zonke izifiso zakho nezidingo zakho ngosuku olubaluleke kakhulu empilweni yakho. Ukwenza kahle ekusikeni, kudaya nakuzo zonke ezinye izindlela zokwelapha zobuhle Izinwele zezinwele zowesifazane di Zoe Hairstylists athuthukisa futhi avumelanise noma yiluphi uhlobo lobuso nezinwele nge Izitayela zomakoti ngokuhambisana nesitayela sakho nokugqoka kwakho futhi ngaso sonke isikhathi ngomphumela omuhle.
Zoe Hairstylists eMessina - Imikhiqizo Yezokusebenza Kusezingeni eliphakeme ye-Artègo kanye neNsizakalo Yokushada
Zoe Hairstylists, ngo-Catania 96 a Messina, igxila ezidingweni zemvelo zezinwele zakho ngezindlela ezingcono kakhulu zokwelapha, ubuhle nokunakekelwa kwezinwele zakho. Ngenxa Yamandla kanye nokuhlangenwe nakho kwesisebenzi sika Izinwele zezinwele zowesifazane ifaneleke kakhulu futhi isesikhathini futhi nokusetshenziswa Kokunakekelwa Kokunakekelwa Kwezinwele Nemikhiqizo Yensiza yohlobo lwe-Artègo, Zoe Hairstylists kukhona iSalone edolobheni Izinwele zezinwele zowesifazane okubuye futhi kuhlobane nekhwalithi, ubuchwepheshe nobuchule. Ukusetshenziswa kwe Imikhiqizo Esemthethweni for Izinwele Artègo kuhlangene Ukuncintisana okukhulu kanye nesipiliyoni emkhakheni wakhe Izinwele zezinwele zowesifazane yikho okwehlukanisa Zoe Hairstylists kusuka kwezinye ubuhle nokucwala. Ngaphezu kwalokho, abalungisa izinwele abalungile be-Zoe Acconciatori haironing salon yabesifazane bakhombisa wonke amakhono abo nobuciko benobuhlakani obunekhono nobungcweti. Inkonzo yomakoti: ithalente ekwakheni nasekwenzeni Izitayela zomakoti kuhlale kumangalisa, kusebenza, kuvuselelwa kuthrendi yakamuva futhi kuvumelana nanoma yiluphi uhlobo lobuso nesambatho somshado kungenye yamandla Izinwele zezinwele zowesifazane nguZoe Acconciatori. the Izitayela zomakoti ngosuku lomshado wakho bayohlala beqamba futhi bangempela, bekhulisa izici zakho nobuhle bakho ngosuku olubaluleke kakhulu empilweni yakho.
Zoe Hairstylists - Impilo Yezinwele Nobuhle
Zoe Hairstylists, ngo-Catania 96 a Messina, yiSalone di Izinwele zezinwele zowesifazane ozokwazi ukwanelisa zonke izidingo zakho zesitayela nokunakekelwa kwezinwele zakho ngekhono nangobungcweti. Isazi nabasebenzi abanekhono bezinwele zabesifazane baseZoe Acconciatori bazokusiza ukuthi unakekele izinwele zakho ukukujabulisa, uhlale uhlelekile futhi uhambisana nezikhathi. Ikhono nobungcweti kubuye kusetshenzelwa odokotela abaIjazi lomakoti, okuzokuqinisekisa ngemithi ezokwenza uzizwe umuhle ngosuku oluhle kunazo zonke! Nge Inkonzo yomakoti, izinwele zezinwele zabesifazane be-salon zizokunikeza i-hairstyle yomshado efanelekile futhi ngokuhambisana nokubukeka kwakho nobuso bakho. Zithembe ochwepheshe bezinwele bangempela: Zoe Hairstylists.
Ikheli: Nge-Catania 96
I-POSTAL CODE: 98124
Umakhala ekhukhwini: 345 6064764
Facebook: Silandele ukusuka lapha
Inombolo ye-VAT: 03086390832